भारतविरुद्ध नेपाल बन्द ! - गजु Real - साप्ताहिक
भारतविरुद्ध नेपाल बन्द !
हैन, कस्तो–कस्तो आन्दोलन हुन थाल्यो देशमा ! भारतको रवैयाविरुद्ध नेपाल बन्द रे ! यो त कस्तो भयो भने, शिक्षकका विरुद्ध विद्यालयमा आगो लगाएजस्तो, डाक्टरका विरुद्ध अस्पताल पोलेजस्तो, पुल बनेन भनेर सडक भत्काएजस्तो, बिजुली बलेन भनेर पोल ढालेजस्तो, छिमेकीले सिमाना मिच्यो भनेर आफ्नो घर जगसहित उखेलेर बसाइँ हिंडेजस्तो, जुन कुरा सज्जन मान्छेले कहिल्यै गर्दैन ।
हो, म विप्लवको बन्दको कुरा गर्दैछु । हुन त यस्तो बन्द गर्ने विप्लव मात्र एक्ला होइनन् । यसअघि थुप्रै राजनैतिक पार्टीले यस्ता आन्दोलन गरेकै हुन् । भारतले नेपालमाथि गरेका थुप्रै नराम्रा घटनामा नेपाल बन्द भएका छन् । अब त त्यस्तो मुख्र्याइँ नहोला भनेको त फेरि उही प्रवृत्ति छ । हैन, विदेशीबाट दु:ख पाउने पनि यही देश अनि त्यसविरुद्धको आन्दोलनका नाममा पीडित हुने पनि यही देश हुन्छ कहीं ?
कञ्चनपुरमा भारतीय प्रहरीद्वारा नेपाली नागरिक मारिए । राज्यले उनलाई सहिद घोषणा गर्‍यो । अधिकांश पार्टीले विरोधमा वक्तव्य निकाले । संघ–संस्थालेहरूले प्रतिक्रिया जनाए । फेसबुकेहरूले आगो ओकले । धेरैले धेरै तरिकाले घटनाको भत्र्सना गरे । तीमध्ये विप्लव कमरेडको शैलीचाहिं अत्यन्तै गज्जबको थियो ।
भारतको विरुद्धमा नेपाल बन्द ! योभन्दा गज्जब ठूलो के हुन्छ ? घटना भएको छ नेपालमा । क्षति भएको छ नेपालीलाई । दु:ख परेको छ देशलाई । घाटा लागेको छ आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई । पोलेको छ नेपालीको छाती । दु:ख पाएको छ नेपाली भूमिले ! अनि बन्दको मार पनि यही देशले खेप्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा भारतविरुद्ध नेपालमा गरिने बन्दलाई आन्दोलन भन्ने कि अन्धोलन भन्ने ? गजुरियल विश्लेषक रनभुल्लमा परेको छ ।
नेपाल बन्दले त नेपाललाई घाटा हुन्छ नि, हैन र कमरेड ? भारतलाई दबाब दिन त भारत बन्द पो गर्न सक्नुपर्छ । नेपालीद्वारा भारत बन्दको आह्वान भन्ने समाचारले कति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाउँछ ! भारत बन्द होस् कि नहोस् न, हाम्रो काम आह्वान गर्दिने हो, लौ जा ! भारतविरुद्धको आन्दोलनमा नेपालका गाडी जलाउनु कस्तो राष्ट्रवाद हो, हाम्ले त बुझेनौं है !
भारत बन्दको आह्वान त एउटा ठट्टा हो तर साँच्चिकै पिडकलाई नै दबाब पुग्ने खालको अभियान पनि त सोच्न सकिन्छ । हामीले त आन्दोलनका नयाँ, शान्तीपूर्ण र सशक्त उपायहरू पो प्रतिपादन गर्नुपर्छ । भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध काठमाडांै बन्द गर्ने, सीमा मिचाइविरुद्ध चारकोसे झाडीका रूख ढाल्ने, दिल्ली रेप केसविरुद्ध डिल्लीबजारमा टायर बाल्ने जस्ता कार्य त केटाकेटी चाला भएन भन्या ? गजुरियल विश्लेषण्क अपेक्षा गर्छ, चन्द कमरेडले उप्रान्त यस्तो गर्नुहुनेछैन ।
यस्तो बन्दको एउटा तर्क हुन सक्छ, सिमाना र सिमानाका नागरिकलाई बचाउन नसक्ने नालायक सरकारलाई दबाब दिन यस्तो गरिएको हो । तर, तपाईं सरकारमा पुग्नुभयो भने भारतको यस्तो गतिविधि कसरी रोक्न सक्नु हुन्छ, कुनै कार्यक्रम, योजना छ ? विश्लेषकको ठम्याइ छ, हामी यस्तो छिमेकीले घेरिएका छौं जसले सके आफूअनुकूलको सरकार बनाउने प्रयास गर्छ नसके यी यसरी नै हेपिरहन्छ, चाहे प्रचण्ड आऊन् वा विप्लवनै आऊन् ।
व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि नेता राष्ट्रघाती छैनन् । सबै नेता सबैको भलो नै गरेर नाम कमाउने प्रयास गर्छन्, तर लोभ, मोह, डर, आश र त्रासका अगाडि उनीहरू बिग्रन्छन् । भारतले हामीलाई हेप्ने कारण पनि यही हो कि हामी उसका गलत रवैयाका विरुद्ध उसलाई होइन, हामी आफैंलाई कमजोर बनाउँछौं । बन्दका नाममा, हड्तालका नाममा, विरोधका नाममा जसले आफ्नै देश कमजोर बनाउँछ त्यसलाई त भारतले पुजेरै राख्छ नि, कसो ?